झापामा युवतीको पेटबाट १० किलोको ट्युमर झिकियो ! - Deshko News Deshko News झापामा युवतीको पेटबाट १० किलोको ट्युमर झिकियो ! - Deshko News
झापामा युवतीको पेटबाट १० किलोको ट्युमर झिकियो !
झापा, भदौ १२
करिब दुई घण्टा लगाएर ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको डा शशि सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सानो आकारको तीन वटा प्वाल बनाएर पेटभित्र रहेको ट्युमरको शल्यक्रिया गरिएको हो । शल्यक्रियामा डा सिंहसहित डा सुमन सिंह र डा मुस्कान सिंह सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
चिकित्सकका अनुसार यति ठूलो ट्युमर कमै मात्रामा हुने गरेको छ । ती युवतीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको र केही दिनमै घर पठाइने अस्पतालले जनाएको छ ।